ढुङ्गेयुगका चर्चित पिरामिड - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
15th December । शनिबार, मंसिर २९, २०७५
ढुङ्गेयुगका चर्चित पिरामिड
प्राचीन कालमा च र्चित व्यक्तिहरुको शव सुरक्षित राखे उनीहरुको आत्माले पुनः सोहि रुपमा जन्म लिने विश्वास गरिन्थ्यो र शवलाई सुरक्षित राख्न मान्छेहरु पिरामिड बनाउथे । मानिसको जीवनमा रहेका मुल्यवान वस्तुहरु उनको शवसँगै राखिन्थ्यो ताकि उनीहरुले दोस्रो जन्म लिँदा ती वस्तुहरु प्रयोग गर्न सकुन् । राजा र मान्यहरुको मृत शरीर जोगाएर राख्न बनाइने यी पिरामीड बाहिरबाट निकै ठूला देखिएता पनि भित्र निकै संकुचित हुन्छन् । खास पिरामिड बनाउने चलन इजिप्टको सभ्यता रहँदै आएको छ । ढुङ्गेयुगमा मानिसले कसरी नक्शा कोरे, कसरी ती गह्रुंगा ढुङ्गा उचाले, कसरी मृत शरीर नकुहिने जुक्ति निकाले यी अनौठा लाग्ने विषयहरु हुन् । संसारका रहेका केहि चर्चित र संरक्षित पुराना पिरामिडहरुकाबारे केहि उल्लेख गरिएको छ ।
द ग्रेट पिरामिड अफ गिजा
यो संसारको सबैभन्दा पुरानो निमार्ण रहेको पिरामिड मानिन्छ । यो संसारको सातौं प्राचीन आश्चर्य हो । ईशापूर्व २५६० मा चिहानको रुपमा करिब २० बर्ष लागेर बनाइएको यो पिरामिड चार सय ८१ फिट अग्लो र आधार भाग सात सय ५५.९ फिट चौडा रहेको छ । यो संसारको सबैभन्दा अग्लो र पुरानो पिरामिड हो । यहाँ २ टन र सोभन्दा बढि तौलका २.३ मिलियन ढुङ्गा प्रयोग भएका छन् । मरुभुमिको बीचमा रहेको यो पिरामिड खुफु राजाको शव राख्नका लागि बनाइएको हो । पाँच सय किलोमिटर वरपर कुनै ढुङ्गाखानी वा ढुङ्गाका श्रोत नरहेको यहाँ २५ देखि ८० टनसम्मका ढुङ्गा प्रयोग भई राजाको चिहान बनेको छ । यहाँ त्यति ठूला ढुङ्गा कहाँबाट ल्याइए र कसरी ल्याइए भन्ने बिषय रहस्यमय नै रहेको छ । ढुङ्गेयुगका मानिसहरुले यति ठूला र आकार मिलेका ढुङ्गा कसरी प्रयोग गरे होलान् यो पनि एउटा रहस्य बनेको छ ।
इल कास्टिलो, चिचन इट्जा
मेक्सीकोमा रहेको इल कास्तिल्लो भगवान कोकोलखानको सम्झनामा बनाइएको हो । यो पिरामिड नौ वा बाह्रौँ शताव्दीमा बनाइएको अनुमान गरिएको छ । ५५ मिटर अग्लो यो पिरामीडमा चार भाग रहेका छन् । यहाँ रहेका हरेक चार भागमा ९१ वटा खुड्किला रहेका छन्, जसको कुल ३ सय ६४ र माथिको थप एक खुड्किलाले ३ सय ६५ हुन जान्छ । यो पिरामीड १९२० देखि १९३० सम्म लगाएर पुननिर्माण गरियो । पुननिमार्णको व्रmममा यो पिरामिड भित्र अर्को सानो मन्दिर गाडिएको पाइएको थियो र यो मेक्सिकोको ठूलो मन्दिरको रुपमा चिनिन थालेको हो । २००६ देखि राष्ट्रिय मानवशास्त्र तथा ईतिहास अनुसन्धान संस्थानले धेरै पुराना स्मारकहरुमा मान्छेहरुको प्रवेशमा रोक लगाएको छ
पिरामिड अफ सेसटियस
इटालीमा रहेको पिरामिड अफ सेसटियस दुई पुरानो बाटो छुट्टिएको दोवाटोको छेउमा रहेको छ । यो पुरानो पिरामिड रोमको सबैभन्दा संरक्षित प्राचीन भवनमध्ये एक हो । यो पिरामिड ईशापूर्व १२ देखि १८ को बीचमा बनेको अनुमान गरिएको छ । गायस सेसटियसको चिहानको रुपमा बनाइएको यो पिरामिड ईंटा जस्तै कडा माटाका आकार प्रयोग गरी त्यसलाई सेतो मार्बलले ढाकेर बनाइएको छ । यो पिरामिडको उचाई एक सय २५ फिट र जग सय फिट रहेको छ । यहाँ रहेका चिहान ५.९५ मिटर लामो र ४.२० मिटर चौडा तथा ४.८० मिटर उचाईको चिहान निर्माण गरिएको छ । काँचो प्लाष्टरमा गरिएका पेन्टिङले सजिएको यहाँको चिहान मधुरो हुँदै जान थालेकाले यसको संरक्षणमा बढि ध्यान दिइएको छ ।
पिरामिड अफ द सन
अज्टलान (मेक्सिकन समु दायका एक जाती) का लागि बनाइएको यो पिरामीड टिवटिहुकान सहरको ठिक बीचमा रहेको छ । १०० ई.समा बन्न सुरु भएको यो पिरामिड दुई चरणमा बनाइएको हो । यो पिरामिडको उचाई २ सय ४६ फिट र चौडा ७ सय ३८ फिट रहेको छ । यो संसारको तेस्रो अग्लो पिरामिडमध्ये एक हो । यो पिरामिडको निर्माण गर्दा सबै भागमा पेन्टिङ गरिएको थियो तर अहिले सबै बिलाउँदै गइसकेका छन् । यो पिरामिडले माय (आर्ट) सभ्यता कस्तो थियो भन्ने कुरा झल्काउँछ, तर भित्र रहेका बहुमुल्य चिजहरु संरक्षणभन्दा पहिले नै लुटिएकाले यस पिरामिडको मूल उद्देश्य पत्ता लाग्न गाह्रो भएको हो ।
इजिप्टमा रहेको रेड पिरामिड विश्वकै सबै भन्दा आकर्षक र उत्कृष्ट पिरामिड मानिन्छ । सेता चुन ढुङ्गाले बनेको यो पिरामिडको बाहिरी सतह घामले डढेर राता र खैरा देखिने भएकाले यो पिरामिडको नाम रेड पिरामिड रहन गएको हो । पारोन सेन्पफेरुले बनाएको यो पिरामिड १७ वर्षमा पूरा भएको मानिदै आएको छ । यो पिरामिडको उचाई ३ सय ४४ फिट र जगको ७ सय २२ फिट क्षेत्रफल रहेको छ । पारोन सेन्पफेरुको यो तेस्रो पिरामिड भएकाले यो पिरामिड उत्कृष्ट रहेको अनुमान पुरातात्वविद्हरुले गरेका छन् ।
यौनांग नै नभएका पुरुषले गरे सयौं महिलासंग यौन सम्पर्क ! जान्नुहोस् कसरि
यो हो दुनियाकै अनौठो गाँउ, जसलाई गरे प्रकृतिले कब्जा (हेर्नुहोस् ५ फोटोमा)
ट्वाइलेट सम्बन्धी ६ रोचक तथ्य ! जान्नुहोस्